kkchha.com:: मोडलिङमा बिध्या को सक्रियता
मोडलिङमा बिध्या को सक्रियता
By प्रकाश धिताल January 29, 2016
अहिलेको समयमा कला संगीतमा लाग्ने मान्छे हरु धेरै हुन्छ्न । त्यसैमा पनि अझ झन रंगमंच भन्न बित्तिकै हरेक व्यक्तिहरु धेरै उत्साहित हुने गर्छन । यहि भिडमा कतिले सफलता हात पार्छन त कति आधा बाटोमै अडिन्छन । यहि दौडिने र उत्साहित हुने क्रममा मोड्लिङ को क्षेत्रमा पनि यस्ता धेरै व्यक्तिहरु आइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा मोड्लिङ आफ्नो करीयर बनाउन लाइ धेरै जनाले मेहनत गरिरहेका हुन्छन र यही क्रममा मोड्लिङलाई आफ्नो करीयरको रुपमा लैजानलाई यस क्षेत्रमा एकदमै लागि परेर धेरै नै मेहनत गरिरहेकी ललितपुरमा जन्मेकी +२ पढ्दै गरेकी १९ बर्षिया मोडल हुन् बिध्या कुवर । अभिनय भन्न बित्तिकै हुरुक्कै हुने यी मोडेलले आफुलाई यो क्षेत्र असाध्यै मन पर्ने कुरा बताउछिन अनि जिन्दगि एउटा फिल्म हो त्यसैले जीवनका हरेक क्रियाकलापहरु फिल्म हुन र त म आफु यस पेशामा काम गर्न उत्साहित छु भन्छिन । ओमेगा कलेजमा पढ्दै गरेकी र सानै देखी मोडलिङ मा रुची भएकी एउटा प्रतिभाशालि व्यक्ति हुन बिध्या । अहिले सम्म थोरै भएपनि राम्रो काम गरि सकेकी हुनाले अझै पनि राम्रा म्युजिक भिडियोमा पाए काम गर्छु भनेर बताउने यि बिध्या संग kkchha.com मा प्रकाश प्रिया स्मृतिले गरेको कुराकानी ।
स्वागत छ यहालाई kkchha.com मा ?
– धन्यवाद नमस्कार
के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोली ?
– खासै केहि छैन २ वटा म्युजिक भिडियो सकेर बसिरको छु .
मोडलिङ गर्छु भन्ने इच्छा कहिले देखी आयो ?
– सानै देखी हो ।
मोड्लिङ नै किन मन पर्यो त ?
– किनभने मलाई फिल्मी लाईफ मन पर्छ जुन मान्च्छेको वास्तबिक जिवनमा हुँदैन , त्यसैले म अभिनय लाई माया गर्छु ।
वास्तबमा कहिले देखि यो क्षेत्रमा लाग्नु भयो ?
– १० कक्षा देखि ।
यो क्षेत्रमा आफुलाई कसरी चिनाउन चाहानु हुन्छ ?
– म एकदमै इमान्दार सोझी केटी आफ्नो पेशा लाई सम्मान गर्ने अनि अरु कसैको आलोचित कुरालाई ध्यानमा नदिकन आफ्नै काममा लगनशील हुने ।
तपाइको बिचारमा कला र quality मा के हो जस्तो लाग्छ ?
– कला हरेक संग हुन्छ अनि आफुमा भएको quality लाई चिन्न सक्नु पर्छ । कला जन्मजात हुने कुरा हो quality आफुले बनाउने कुरा हो ।
सहयोग कतिको पाई राख्नु भएको छ, अनि यो क्षेत्रामा प्राय कस्को बढी सहयोग पाउनु भएको छ ?
– आफ्नो परिवार अनि आफ्न्त हरु बाट ।
यो क्षेत्रमा उसो भए आफ्नो धारातलको रुपामा कस्लाई लिन चाहानु हुन्छ ?
– अहिले सम्म त्यस्तो कोही छैन भयो भने पछी भन्छु ।
अहिले सम्म कती ओटा म्युजिक भिडियो खेल्नु भयो ?
– १ बिज्ञापन ३ ओटा म्युजिक भिडियो काम गरिसकेकी छु
तपाईं लाई भिडियोको लागी सबै भन्दा पहिला कस्ले अवसर दिनु भयो ?
– rj प्राण ले दिनु भएको हो ।
चनचले कती को हुनुहुन्छ ?
– छु , जे कुरा छ त्यही स्पस्ट बोल्न सक्छु भन्न सक्छु ।
सजिलो कतिको छ त यो क्षेत्रमा काम गर्न लाई अझ बिशेष गरी तपाईंलाई ?
– सोचे जस्तो सजिलो छैन , अनि यो क्षेत्रमा धेरै नै स्वार्थी मान्छे हरु छन् जहा कि कला लाई हैन पैसा लाई धेरै माया गर्छन र मा त केटि मान्छे अझ मलाई त काम गर्न धेरै नै गार्हो छ किन कि यहाँ केटि मान्छे हरुलाई हेर्ने नजर नै फरक हुन्छ सो ।
अब तपाई कस्ता व्यक्तिका र कस्ता गित हरु पाए म्युजिक भिडियो खेल्न हुन्छ ?
– ठ्याक्कै यस्ता गित भनेर त भन्दिन म गितको थिम राम्रो छ भने त खेली हाल्छु अनि व्यक्ति को कुरा गर्दा निस्वार्थ भावना भएको संग काम गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
भिडियोको बारेमा आफ्नो लागि के भन्न चाहानुहुन्छ ?
– खासै केहि छैन मेरो आउदै गरेको भिडियो हेर्दिनुस सल्लाह सुझाब दिनु होस् त्यहि सल्लाह सुझाब बाट अगाडी बढ्ने अवसर पाउने छु
भिडियो खेल्छु भनेर अब आउने नया लाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
– सोचे जस्तो छैन तैपनि राम्रो सोचका साथमा केहि गर्छु भनेर आगाडी बढ्नु हुन्छ भने गर्नुस तर कसैको लहै लहैमा लागेर काम नगर्नुस दुनिया स्वार्थि छ आफ्नो तर्फ बाट बच्नुस ।
– अन्त्यमा मलाई माया गर्दिनु हुने तपाई सबै साथीहरु लाई धेरै धेरै धन्यबाद दिन चाहान्छु अनि मेरो परिवार आफन्तजन प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहान्छु र अझै राम्रो गर्दै जाने छु तपाई को साथ र सहयोगको खाचो छ ।
हवास त यहाँ लाई धेरै धेरै धन्यबाद ?
– धन्यबाद kkchha.com अनि तपाई प्रकाश प्रिया स्मृति जी लाई , मलाई मेरो बारेमा केहि कुरा राख्न दिनु भएको मा ।